လတ်တလောအင်တာနက်စွဲဉာဏ်ကောင်းသော ဦး နှောက်လေ့လာမှုများတွင် Porn (2013) - သင်၏ ဦး နှောက်သည် Porn တွင်ပါဝင်သည်
comments: ဤဆောင်းပါးတွင်ပထမဦးဆုံး (ဇန်နဝါရီ, 2013) ရေးသားခဲ့ကတည်းကအတော်များများလေ့လာမှုများထုတ်ဝေခဲ့ကြသည်။ အားလုံးအင်တာနက်စွဲခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းစွဲနှစ်ဦးစလုံးမှထောက်ပံ့မှုကိုချေးငှားရမည်။
၏နေ့စွဲစာရင်းဖွင့် Porn အသုံးပြုသူများအပေါ်ဦးနှောက်လေ့လာရေး
လေ့လာမှု ၃၀ ကျော်သည်တွေ့ရှိချက်များကိုညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်း (သည်းခံမှု)၊ ညစ်ညမ်းသောအကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းနှင့်ရုပ်သိမ်းခြင်းလက္ခဏာများနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိကြောင်းတွေ့ရှိရသည် (စွဲလမ်းနှင့်ဆက်စပ်အားလုံးလက္ခဏာနှင့်ရောဂါလက္ခဏာများ) ။
ကျွန်တော်ရေးသားခဲ့သည်ကတည်းက အင်တာနက်ကိုစွဲလမ်းကျုံ့ဦးနှောက်: Porn အသုံးပြုသူများအဘို့အနိမိတျဆိုးသတင်းများမကြာသေးခင်အွန်လိုင်းဗီဒီယိုဂိမ်းစွဲလမ်းသုတေသနကိုင်တွယ်သောအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဒီရေသစ်ကိုသုတေသနအချို့အသက်အရွယ်အုပ်စုများရှိလူများတစ်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ကြီးမားရာခိုင်နှုန်းကအင်တာနက်ကိုယ်တိုင်ကသုံးစွဲဖို့စွဲဖြစ်ကြောင်းထုတ်ဖော်, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှလှိမ့်ခဲ့သည်။
အသစ်သုတေသနလေ့လာမှုများနှစ်မျိုးပါဝင်သည်။ တဦးတည်းနည်းစနစ်စွဲနှင့်ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုများအတွက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, စွဲ-related အပြောင်းအလဲများဦးနှောက် Scan ဖတ်များကိုအသုံးပြုသည်။ အခြားစစ်တမ်းများနှင့်စွဲစမ်းသပ်မှုများကိုအသုံးပြုသည်။ (နမူနာစမ်းသပ်) ဦးနှောက်သိပ္ပံပညာရှင်များလည်း Non-စွဲ၏စွဲနှင့်ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုများ၏စမ်းသပ်အုပ်စုများသို့ဘာသာရပ်များကိုဝေတို့အားဤသို့သောစမ်းသပ်မှုကိုအသုံးပြုပါ။ (ထို 300 ကိုကြည့်ပါ အင်တာနက်စွဲဦးနှောက်လေ့လာမှုများ။ ဖတ် တိုတောင်းသောအကျဉ်းချုပ် အင်တာနက်စွဲလေ့လာမှုများနှင့်သူတို့၏အ ကွောငျးကိုဖျောပွ porn။ ဒါမှမဟုတ်တွေ့မြင် ဒီစုဆောင်းမှု အင်တာနက် နှင့် ဗီဒီယိုဂိမ်းစွဲလမ်းလေ့လာမှုများ) ။
ဒီ post မှာတော့နှစ်မျိုးလုံးရဲ့သုတေသနကိုဆွေးနွေးမှာပါ၊ ဒါပေမယ့်သူတို့ကဘက်လိုက်မှုနဲ့ကိုင်တွယ်ရန်မလွယ်ကူသောကြောင့် Hard-Science ဦး နှောက်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှုကိုအဓိကစိတ်ဝင်စားပါတယ်။ သုတေသနအသစ်နှင့် ပတ်သက်၍ မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများရှိပါသည်။
မေးခွန်းလွှာလေ့လာမှုများသည်ကွဲပြားသောဝေါဟာရများကိုအသုံးပြုကြသော်လည်း (စွဲလမ်းမှုသည်“ ပြproblemနာရှိသောအင်တာနက်အသုံးပြုမှု”၊ “ အသုံးမပြုသောအင်တာနက်အသုံးပြုမှု”) နှုန်းထားများမှကွဲပြား 8 ရာခိုင်နှုန်းခန့်သကဲ့သို့မြင့်မားဖို့ 21 ရာခိုင်နှုန်းကို လူငယ်များအတွက်။ ထို့အပြင်တစ်ဦးအတွက် ကျား, မများကစွဲလမ်းမှုနှုန်းဖော်ပြခဲ့သည်ကြောင်းလေ့လာမှုတစ်ဦး လေးပုံတပုံ စမ်းသပ်ပြီးယောက်ျားတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားစွဲ-အဖြစ်အမျိုးသမီးကျောင်းသားများထက်လျော့နည်းတစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းနှိုင်းယှဉ်ပါကရောဂါခဲ့ကြသည်။
အင်တာနက်စွဲသုတေသီများအတိုင်းအတာ အားလုံး အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်, ဒါကြောင့်ညစ်ညမ်းနှင့်လူမှုရေးမီဒီယာအတူတကွ lumped နေကြသည်။ အများဆုံးတစ်ခုမှာ မကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုများဥပမာ, တရုတ်စွဲ၏အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ဖော်ပြထား:
ဘာသာရပ်များသည်အင်တာနက်ကိုနေ့စဉ်နီးပါးအသုံးပြုခဲ့ကြပြီး ၈ နာရီကျော်ကြာသည်။ နေ့တိုင်းမော်နီတာရှေ့တွင်ဖြစ်သည်။ အများအားဖြင့်ဆိုက်ဘာသူငယ်ချင်းများနှင့်စကားပြောခြင်း၊ အွန်လိုင်းဂိမ်းကစားခြင်းနှင့် အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းသို့မဟုတ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူရုပ်ရှင်ကြည့်. [အင်တာနက်ကညစ်ညမ်း, လမ်းဖြင့်တရားဝင်တရုတ်တွင်ပိတ်ပင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ]
အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုကျွန်တော်မြင်ကြပြီသစ်ကိုလေ့လာမှုတွင်မဆိုအထီးကျန်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။ (အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုသည်ကိုအဘယ်သူ သာ ? အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းများအတွက်) ဒါပေမယ့် Twitter ကိုစွဲကနေ Facebook ကိုစွဲခွဲထုတ်ဖို့လိုအပ်သနည်း သို့မဟုတ်အားလုံးကိုထိုကဲ့သို့သော applications များအချို့သောအသုံးပြုသူများအတွက်စွဲလမ်းဖြစ်လာနိုင်သည်ဟုဆုံးဖြတ်ရန် EverQuest စွဲထံမှ Warcraft စွဲ၏ကမ္ဘာ့ဖလား? အမှတ်ကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းရိုးရှင်းစွာတဦးတည်းကိုပိုပြီးအလွန်လူကြိုက်များ, အင်တာနက် pastime ဖြစ်ပါသည်, ထို့ကြောင့်အလားအလာစွဲလမ်း။
လူအများကအင်တာနက်ကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အထောက်အကူအဖြစ်အသုံးပြုခြင်းသည်သင့်အားရှုပ်ထွေးစေသည်မဟုတ်ပါစေနှင့်။ ၎င်းသည်အင်တာနက်ပေါ်မှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုဖန်တီးသည့်လက္ခဏာများဖြစ်သည် ကွဲပြားခြားနားတဲ့ လိင်ကနေဗီဒီယိုဂိမျးသို့မဟုတ် slot က-စက်လောင်းကစားဝိုင်း-ထားတဲ့အချို့သောအသုံးပြုသူများသည်ချိတ်ရန်၎င်း၏စွမ်းရည်များအတွက်အကောင့်ရန်အလွန်ဆင်တူအခြိနျ။ ဤ 2013 လေ့လာချက် အဆိုပါတူညီမှတ်ချက်ချ:
“ အင်တာနက်သုံးစွဲသူအမြောက်အများအတွက်အင်တာနက်ကိုအဓိကအသုံးပြုမှုနှစ်ခုအနက်မှ ၀ င်ရောက်မှုကိုရရှိရန်အတွက်ထောက်ပြသင့်သည်။ ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်လောင်းကစားဝိုင်း ဤအဆုံးစွန်သောလှုပ်ရှားမှုများရှင်းလင်းစွာအလားအလာ-စွဲလမ်းပြည်နယ်များမှဘာသာရပ်များမှာ'အင်တာနက်စွဲလမ်းမှု' နှင့်သက်ဆိုင်သည့်မည်သည့်ရလဒ်မဆိုအမှန်တကယ်အခြားစွဲလမ်းမှုပုံစံများ (ဥပမာ - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများ၊ လောင်းကစားခြင်းများ) ဖြစ်သည်။ "
ဤရွေ့ကားဝိသေသလက္ခဏာများမှာ-a-click နှိပ်ပြီးအသစ်အဆန်း-အင်အားစိုက်ထုတ်လက်လှမ်းနှင့်တုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ်လှုံ့ဆော်မှုမှတဆင့်မျှော်လင့်ချက်များများစဉ်ဆက်မပြတ်ချိုးဖောက်မှုများပါဝင်သည်။ ဤအရာအားလုံးသည်အကျိုးကို circuitry အတွက် neurotransmitter dopamine လွှတ်လိုက်ပါ။ Overconsumption အရှင်စိတ်ဓါတ်များ, ယုံကြည်မှုနှင့်ပျော်မွေ့တုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းကိုလက်ကမြင်းအချို့ဦးနှောက်ထဲမှာ dopamine တုံ့ပြန်မှု dysregulate နိုင်ပါတယ်။
သို့တိုင်ယုံကြည်တယ်အင်တာနက်ကို erotica အင်တာနက်စွဲရန်အန္တရာယ်ကင်းချွင်းချက်ဖြစ်သနည်း ဝမ်းနည်းပါတယ်, ဒါပေမယ့်ပြီးသားဖြစ်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားပြီး နောက်ထပ် မလှူဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြဖွယ်ရှိ မည်သည့်အခြားအင်တာနက်လှုပ်ရှားမှုထက်။
မည်သည့်ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, အမူအကျင့်များနှင့်နှစ်ဦးစလုံးစှဲ-အလုံးစုံတို့အဘို့အခြေခံဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကိုသို့မှသာအလားတူဓာတု-များမှာ စွဲလမ်းအထူးကု ယခုစဉ်းစားပါ အားလုံး တဦးတည်းရောဂါထက်အများကြီးကွဲပြားခြားနားသောရောဂါများဖြစ်နိုင်ဖို့စွဲ။ တစ်စုံတစ်ဦးကလောင်းကစားဝိုင်း, ဗီဒီယိုဂိမျးသို့မဟုတ်အင်တာနက်စွဲရောဂါဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်စေ, ခန္ဓာဗေဒနဲ့ဇီဝကမ္မမူမမှန်တစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ်စုဆောင်းခြင်း (အသေးစားမူကွဲနှင့်အတူ) ဖြစ်ပွားခဲ့သည်မူကြောင်းကိုဖော်ပြသည်။
အမှန်စင်စစ်, တူညီတဲ့မော်လီကျူး switch ကိုအတွက်စွဲ-related ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများအစပျိုးလိုက်ခြင်း အားလုံး စွဲ။ ဤပြောင်းလဲမှုများအစပျိုးလိုက်ခြင်းကြောင့်အဆိုပါမာစတာ switch သည်ပရိုတိန်းဖြစ်ပါသည် DeltaFosB။ ၏နာတာရှည်, အဆင့်မြင့်စားသုံးမှုနှစ်ဦးစလုံး သဘာဝကဆုလာဘ် (လိင်, သကြား, High-အဆီ) နှင့်အရှင်နောက်ထပ်ဦးနှောက်ပြောင်းလဲမှုများအဆငျ့ဆငျ့ကိုထွက်လာပါတယ်, အကျိုးကို circuit ကိုများတွင်စုပြုံမှအလွဲသုံးစားမှုအကြောင်းမရှိ DeltaFosB ၏နီးပါးမည်သည့်မူးယစ်ဆေးများနာတာရှည်အုပ်ချုပ်မှု။
ဒါဟာ porn စွဲအပါအဝင်သူတို့ထဲကတစုံတယောက်သောသူသည်, ၏အဖြစ်မှန်တည်ထောင်ရန်နိုင်ရန်အတွက်အင်တာနက်စွဲ၏အထူးသဖြင့်အမျိုးအစားများကိုခွဲထုတ်ရန်, စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပေမယ့်မလိုအပ်တဲ့ပါလိမ့်မယ်။
တိရိစ္ဆာန်အပေါ်လေ့လာမှုများနှင့်လူ့ဘာသာရပ်များသုံးဆယ်နှစ်နှင့်ထောင်ပေါင်းများစွာတိကျတဲ့ထင်ရှားပါပြီ ကြယ်စု စွဲ -related ဦး နှောက်အပြောင်းအလဲများကို၏။ ဒါကြောင့်ဒီ ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုဟာ ဦး နှောက်ရဲ့ပုံမှန်နေ့စဉ်လုပ်ဆောင်မှုနဲ့မတူဘူးဆိုတာသိပ္ပံပညာရှင်တွေယုံကြည်ထားပါတယ်။
ဥပမာ, တရုတ်လေ့လာမှု အထက်တွင်ကိုးကားသုတေသီများကကောက်ချက်ချ,
IAD [အင်တာနက်စွဲ] ဦးနှောက်မှအလေးအနက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်စေလျက်, neuroimaging တွေ့ရှိချက်နောက်ထပ် IAD အဆိုပါ dopaminergic ဦးနှောက်စနစ်များအတွက်အလုပ်မဖြစ်နှင့်ဆက်စပ်နေသည်သရုပျဖျော။ ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်ကိုလည်း IAD သည်အခြားစွဲလမ်းမမှန်နှင့်အတူအလားတူ neurobiological မူမမှန်ဝေမျှစေခြင်းငှါ၎င်းပြောဆိုချက်ကိုထောက်ခံ [ဤကဲ့သို့သောပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုမမှန်ခြင်းနှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းအဖြစ်။ ]
ဦး နှောက်အပြောင်းအလဲနှင့်ဆက်စပ်သောဆက်စပ်မှုရှိကိုယ်စားလှယ်များနှင့်အတူလေ့လာမှုများပြုလုပ်ပြီးနောက်လူ့စကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှုများတွင်ယခုထိတွေ့မြင်နိုင်သည့်အပြောင်းအလဲများကိုကျွန်ုပ်တို့လေ့လာပါမည်။ (ဤသုံးသပ်ချက်ကိုသတိပြုပါ အင်တာနက်ကိုစွဲလမ်းမှုကဦးနှောက်လေ့လာမှုများ ဤဆောင်းပါးတွင်ပြီးနောက်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်: အင်တာနက်နှင့်ဂိမ်းစွဲမှု: Neuroimaging လေ့လာရေးတစ်ဦးကစနစ်တကျစာပေကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း)
Desensitization ။ အခြေခံကျသောပြောင်းလဲမှုတစ်ခု၏ပျော်ရွှင်မှုအားလုံးအပေါ်တုန့်ပြန်မှုအားယေဘူယျအားဖြင့်ခေါ်ဆိုခြင်းကိုရည်ညွှန်းသည်။ မူးယစ်ဆေးစွဲသူကိုအပျော်အပါးကိုမထိခိုက်စေဘဲ dopamine-raising လှုပ်ရှားမှုများ၊ အင်တာနက်စွဲစွဲမှုကိုလေ့လာခြင်း လေ့လာမှု 1, လေ့လာမှု 2.
အသိ။ စွဲ -related တွေကိုမှ Hyper- တုံ့ပြန်မှု။ လူတစ် ဦး ၏စွဲလမ်းမှုအတွက်ခက်ခဲသောလျစ်လျူရှုမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ လေ့လာမှု 1, လေ့လာမှု 2
Hypofrontality. တိုကျရိုကျ-ပေါ်၌ရှိသောအမြှေးမီးခိုးရောင်ကိစ္စနှင့်လည်ပတ်ကျဆင်းခြင်း။ ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်, ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းနှင့်အကျိုးဆက်များကိုကြိုမြင်နိုင်ဖို့စွမ်းရည်လျော့နည်းစေသည်။ လေ့လာမှု 1, လေ့လာမှု 2, လေ့လာမှု 3, လေ့လာမှု 4, လေ့လာမှု 5, လေ့လာမှု 6, လေ့လာမှု 7, လေ့လာမှု 8
ပုံမှန်မဟုတ်သော White ကအရေးပါ။ အဖြူကိစ္စကဦးနှောက်၏ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများအကြားဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းပါဝင်သည်သော်လည်းမီးခိုးရောင်ကိစ္စ, တာဝန်ရှိအပြောင်းအလဲနဲ့သတင်းအချက်အလက်များသည်။ ဆုလာဘ် circuit ကိုအဆောက်အဦများနှင့်တိုကျရိုကျ cortex အကြားလမ်းကြောင်း၏ abnormalities ဆင်းရဲသောသူတို့သည်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်နှင့်လျှော့ချသိမြင်မှုစွမ်းရည်နှင့်ပတ်သက်သောနေကြသည်။ လေ့လာမှု 1, လေ့လာမှု 2, လေ့လာမှု 3.
DeltaFosB ထိုအစွဲ-related ပြောင်းလဲမှုများအများစုလျှင်အားလုံးမဟုတ်ဖြစ်ပေါ်ဖို့လူသိများသည်။ သူတို့ကအကျိုးရှိမရှိကြပေ။ (ကအနာဂတ်ပို့စ်တွင်အဘယ်ကြောင့်နောက်ထပ်။ )
ဤကျယ်ပြန့်စွာဖြီးထားသောအညွှန်းကိန်းတစ်ခုချင်းစီတွင်သိမ်မွေ့သောစွဲလမ်းမှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ဆယ်လူလာနှင့်ဓာတုပြောင်းလဲမှုများကိုရောင်ပြန်ဟပ်သည်။ ကင်ဆာအကျိတ်စစ်ဆေးခြင်းသည်ဆက်စပ်ပါးနပ်သောဆယ်လူလာ / ဓာတုပြောင်းလဲမှုများကိုမပြသသကဲ့သို့။
လိုအပ်သောနည်းပညာများ၏ထိုးဖောက် ၀ င်ရောက်မှုကြောင့်သိမ်မွေ့သောပြောင်းလဲမှုအများစုကိုလူ့ပုံစံများတွင်အကဲဖြတ်။ မရပါ။ သို့သော်၎င်းတို့သည်တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များတွင်ဖော်ထုတ်ထားသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, desensitization ခြေရာခံရန်, စကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှုများလူသားများတွင် D2 အဲဒီ receptor အပြောင်းအလဲများကိုတိုင်းတာနိုင်ပါတယ်။ သို့သော်အခြားအဓိကသော့ချက်စွဲသည့်အမှတ်အသားများဖြစ်သောပိုမိုမြင့်မားသော dynorphin နှင့် DeltaFosB စုဆောင်းခြင်းစသည်တို့သည်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှုတွင်ပေါ်လာလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
အဆိုပါအချက်သည်ဦးနှောက် Scan ဖတ်မြင်နိုင်နိုင်တဲ့ macro အပြောင်းအလဲများရှိပါသည်ရှိရာ, သိမ်မွေ့, မိုက်ခရိုအပြောင်းအလဲများကိုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါနိုင်တဲ့ macro အပြောင်းအလဲများအားလုံးစှဲဖို့ဘုံနောက်ဆုံးဒိုမီနိုရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်သူတို့ကလည်းမိုက်ခရိုပြောင်းလဲမှုများသက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ်။
ဤ ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုသည်ယခင်ရှိပြီးသားရောဂါများကြောင့်သာမဟုတ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့မည်သို့သိရသနည်း။
အတော်များများကကျွမ်းကျင်သူများက စွဲဖွံ့ဖြိုးသူသာလူတွေကိုထိုကဲ့သို့သော OCD ဒါကြောင့်ထွက်စိတ်ကျရောဂါ, ADHD နဲ့အဖြစ် Pre-တည်ဆဲမမှန်အတူရှိသူများဖြစ်ကြသည်, ဒါကြောင့်စွဲလမ်းအမြဲတမ်းကြောင်းဆုံးမသွန်သင်ကြပြီ အလယ်တန်း ရောဂါဘယ, နှင့်ယူဆရအတန်ငယ်လွှဲမရှောင်သာ။ ဦးနှောက်စွဲဖို့သူတို့ရဲ့အားနည်းချက်အတွက်ကွာခြားလုပ်ပေးနေချိန်မှာ (ဥပမာ, ဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်ရှိပါတယ် ပိုပြီးအားနည်းချက် ASAM ၏စွဲအထူးကျွမ်းကျင်သူများသည်အရွယ်ရောက်ပြီးသော ဦး နှောက်ထက်) မူလတန်း ရောဂါ။ ဒါကြောင့်ပင်တစ်ခုနောက်ခံရောဂါ၏ရှေ့မှောက်တွင်မပါဘဲဖွံ့ဖြိုးနိုင်, ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသို့ယင်း၏ဖြစ်ပေါ်စေသည် ကိုယ်ပိုင်ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများ ဆိတ်ကွယ်ရာကိုအခြားရောဂါကနေ.
ထို့အပြင်လူတစ် ဦး သည်မူးယစ်ဆေးစွဲရန်အတွက်မွေးရာပါပုံမှန်မဟုတ်သည့်လူနည်းစုဝင်ဖြစ်ရန်မလိုအပ်ကြောင်းသိရှိရန်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌အရွယ်ရောက်သူ ၇၉ ရာခိုင်နှုန်းသည်အဝလွန်သူများနှင့်အ ၀ လွန်သူများ၏ထက်ဝက်နီးပါးတွင်အစားအစာစွဲနှုန်းကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။ ။ ဤသည်အထူးသဖြင့်မှန်သည်အဘယ်မှာရှိ သဘာဝကဆုလာဘ်၏အစွန်းရောက်ဗားရှင်း အစားအစာနှင့်လိင်ကဲ့သို့အစိုးရိမ်ကြသည်။ junk အစားအစာနှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းကြှနျုပျတို့အားလုံးအတန်ငယ် Impulse ကိုလိုက်ရန်ပြောင်းလဲကြောင်းသှေးဆောငျနှစ်ခုစလုံးအစွန်းရောက်ဗားရှင်းဖြစ်ကြသည်။
ထို့အပြင်အသစ်သောလေ့လာမှုနှစ်ခု (လေ့လာမှု 1, လေ့လာမှု 2) စွဲ-related ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများအတွက်သူတို့ကိုယ်သူတို့နောက်ပြန်ဆုတ်ခဲ့ထင်ရှား ဟောင်းတဦး စွဲ. ဦး နှောက်အပြောင်းအလဲသည်ယခင်ရှိပြီးသားအခြေအနေများနှင့်သက်ဆိုင်ပါကထိုသို့ဖြစ်မည်မဟုတ်ပါ။ အလားတူပင်, ကြာကြာစွဲ, ချိတ်ဆက်နေကြသည် ပိုပြီးပြင်းထန် သူတို့ရဲ့စွဲလမ်း-related ဦးနှောက်ကိုပြောင်းလဲ:
တကယ်ပါပဲ, မကြာသေးမီကကောက်ချက်ချကျွမ်းကျင်သူများက သူတို့အကြောင်း,
အင်တာနက်စွဲခြင်းရောဂါများအတွက်အစိုင်အခဲရောဂါဗေဒခန့်မှန်းရှာမနိုင်။ အင်တာနက်စွဲခြင်းရောဂါ [ထိုကဲ့သို့သောစိတ်ကျရောဂါ, စိုးရိမ်စိတ်, ရန်လိုမုန်းတီးမှု, လူ့ sensitivity ကိုနှင့် psychoticism အဖြစ်] ကစွဲမှအချို့သောရောဂါဗေဒပြဿနာများဆောင်ကြဉ်းလိမ့်မည်။
ဒီနေရာမှာကိုးကားများစွာမကြာသေးမီအင်တာနက်စွဲလေ့လာမှုများအပြင်, ဒီအပိုင်းအစများအတွက်အထောက်အကူထုတ်ဝေသောပစ္စည်းများမှလာ စွဲလမ်းဆေးပညာ American Society (ASAM), စွဲအထူးကုနေသောထင်ပေါ်ကျော်ကြားဆရာဝန်များနှင့်သုတေသီအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့။ ဒီမှာအနေဖြင့်အချို့သောကောက်နှုတ်ချက်များမှာ ASAM အမေးအဖြေများ, လယ်ပြင်၌ကျွမ်းကျင်သူများစွဲသတ်မှတ်ဘယ်လိုအလင်းကိုသွန်းပြီးသော:
Q များကို: အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်အသစ်နှင့် ပတ်သက်၍ ဘာတွေခြားနားပါလဲ။ [နှင့်] ASAM တကယ်အစားအစာနှင့်လိင်ဖြစ်လို့ဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်ပါသလား
“ ဒီအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်အသစ်ကဆေးစွဲတာဟာမူးယစ်ဆေးဝါးမဟုတ်တာ၊ ၎င်းသည်လူတစ် ဦး အသုံးပြုသောအရာများမဟုတ်ဘဲ၎င်းတို့ကိုစွဲလမ်းစေသည်။ အသုံးပြုမှုပမာဏသို့မဟုတ်ကြိမ်နှုန်းပင်မဟုတ်ပါ။ စွဲလမ်းမှုဆိုသည်မှာလူတစ် ဦး ၏ ဦး နှောက်တွင်အကျိုးရှိသောအရာများသို့မဟုတ်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေသည့်အပြုအမူများနှင့်ထိတွေ့မိသောအခါဖြစ်ပျက်သောအရာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဦး နှောက်နှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်ပတ်သက်သောဆုချိူးဆက်နွယ်မှုများနှင့်ဆက်စပ်သည်ထက်ယင်းသည်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကိုတိုက်တွန်းသည့်ပြင်ပဓာတုပစ္စည်းများသို့မဟုတ်အပြုအမူများထက် ပို၍ ဖြစ်သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ နှင့်လောင်းကစားအပြုအမူတွေ "ဆုလာဘ်များ၏ရောဂါဗေဒလိုက်စား" နဲ့ဆက်စပ်နိုင်ပါတယ် စွဲ၏ဤအသစ်သောအဓိပ်ပါယျတှငျဖျောပွထား။ "
စွဲမှ neuroscience ၏လက်ရှိပြည်နယ်အနှစ်ချုပ်ရန်:
စွဲဆက်စပ် အပြုအမူနှင့်ရောဂါလက္ခဏာ တိုင်းတာဦးနှောက်ကိုပြောင်းလဲများ၏ = တိကျတဲ့သတ်မှတ်ချက်။
အားလုံးစှဲမှာတွေ့ရတဲ့ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကို sensitive က desensitization, hypofrontality နှင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောအဖြူကိစ္စပါဝင်သည်။ အင်တာနက်စွဲလမ်းအသုံးပြုသူတစ်ဦးကအင်တာနက်ညစ်ညမ်း, Facebook, www.reddit.com, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးပေါင်းစပ်ခြင်းကအင်တာနက်လှုံ့ဆော်မှုကြည့်ရှုနေသည်ဖြစ်စေ, အဘယ်သူမျှမချွင်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။
စွဲမှုနှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်အပြောင်းအလဲများ (အပြုအမူနှင့်ဓာတုဗေဒနှစ်မျိုးလုံး) သည် DeltaFosB စုဆောင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ မူးယစ်ဆေး၊ လောင်းကစား၊ အစားအစာ၊ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုစွဲလမ်းမှုရှိမရှိမော်လီကျူးပြောင်းလဲမှုတစ်ခုရှိသည်။
အင်တာနက်စွဲပေါ်မှာရှိသမျှဦးနှောက်သုတေသန (ဒီ post ကို၏အဖြစ်တစ်ဆယ်လေ့လာမှုများ) တစ်ဦးတည်းသာဦးတည်ထောက်ပြနိုင်အောင်ဝေးပြုမိ။
သငျသညျကိုသတိပွုမိနေတယ်ဆိုရင် ဤအမနှစ်မြို့ဖွယ်လက္ခဏာများသငျသညျအင်တာနက်စွဲရှိစေခြင်းငှါ, သင်၏အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုပြဿနာရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
သင်တို့သည်ငါတို့၏ဆက်စပ် post ကိုလည်းတွေ့ပါစေခြင်းငှါ နိုင်ငံရေး, Porn နှင့်စွဲအာရုံကြောသိပ္ပံ အကျိုးစီးပွား။
(L) အင်တာနက်ကိုစွဲလမ်းသစ်စိတ်ကျန်းမာရေး Disorder Is